UZulu uphuziswe ihalazelo ngomhlaba – Bayede News
“UMthethosisekelo waseNingizimu Afrika uvikela ngisho
“UMthethosisekelo waseNingizimu Afrika uvikela ngisho umbulali owenze okwesabekayo ukuba athole ithuba lokuziphendulela. Kuyaxaka-ke ukuthi uZulu engabulele muntu ngomhlaba wakhe bese enqanyulezwa ngezinsolo kuthi kusenjalo anqatshelwe ukuziphendulela. UZulu namuhla eNingizimu Afrika uphathiswa okwemilanjwana engafunwa muntu. Sikhacwa ngabantu okwezinja ezidle amaqanda. Umbuzo uthi senzeni kubani. Yini lena eminyakeni engama-24 yedemokhrasi esivulele inzondo engaka ebhekiswe kimi nakithi. Yini lena engiyenze kuHulumeni? Uma kuwukuthi impi ibhekiswe kimi siqu yini pho kudikwadikwe uZulu nesimiso soBukhosi bakhe? Zenzeni izingane zami, wenzeni uZulu?”
Embikweni walo ithimba lathi livumile ukuthi izinguquko ziyadingeka ku-Ingonyama Trust. Kuphakathi kokuthi i-Ingonyama Trust Act iyasulwa nayo iTrust ihlakazwe noma ukuphathwa komhlaba kwehliselwe kohulumeni bendawo, abahlali banikwe amalungelo ukuphathwa kwezindawo kube semiKhandlwini yeNdabuko,” kufundeka umbiko.Kusenjalo, ithimba eliluleka uMengameli nalo lathi kunemithetho emihlanu ethikameza ubunini nokubuswa kwemihlaba yasemakhaya.